အထင်ကြီးခြင်းတွေ... အထင်သေးခြင်းတွေရဲ့နောက်ကွယ်မှာ... [ သင်္ဘောသားရင်ဖွင့်သံ (၁၅)... Seamen's Voice-15 ] ~ MSU Portal
အထင်ကြီးခြင်းတွေ... အထင်သေးခြင်းတွေရဲ့နောက်ကွယ်မှာ... [ သင်္ဘောသားရင်ဖွင့်သံ (၁၅)... Seamen's Voice-15 ]
5/29/2013 11:39:00 PM Navi Kyaw No comments
“ဒေါ်လာစားတွေ” ဆိုတဲ့ အထင်ကြီးခြင်းတွေရဲ့ နောက်ကွယ်မှာ..
သူတို့ပဲ ပေးဆပ်ဖူးတဲ့ အိပ်မက်ဆိုးတွေရှိတယ်…
သူတို့ပဲ ကြုံဖူးတဲ့ သွေးပျက်စရာတွေရှိတယ်…
သူတို့ပဲ ခံစားဖူးတဲ့ ကြေကွဲနေ့တွေရှိတယ်…
သူတို့ပဲ နားလည်တဲ့ ရင်းနှီးမှုတွေရှိတယ်…။
“ကုန်းပေါ်ရောက်ရင် အူကြောင်ကြားတွေ” ဆိုတဲ့ အထင်သေးခြင်းတွေရဲ့နောက်ကွယ်မှာ..
ခင်ဗျားတို့ မမြင်တွေ့ဖူးတဲ့ ကြမ်းတမ်းမှုတွေ ရှိတယ်…
ခင်ဗျားတို့ မခံစားဖူးတဲ့ မြိုသိပ်မှုတွေ ရှိတယ်…
ခင်ဗျားတို့နားမလည်တဲ့ ဖိစီးမှုတွေ ရှိတယ်…
ခင်ဗျားတို့ မရင်းနှီးတဲ့ ခြောက်ခြားစရာတွေ ရှိတယ်…
ခင်ဗျားတို့ မစာနာနိုင်တဲ့ အိပ်မရပဲ ရင်ဘတ်ဟောင်းလောင်းနဲ့ မိုးလင်းသွားတဲ့ညတွေ ရှိတယ်…။
ချစ်ရတဲ့သူတွေ ခါးလှ ၀မ်းဝပြီး အဆင့်မြင့်မားဖို့ လှိုင်းကြိုလေကြား သွေးထဲဆားပေါက်အောင်
စွန့်လွှတ်လုပ်စားကြတဲ့ ရေပေါ်ကဘ၀တွေအပေါ် အထင်တော့မသေးစေချင်…….
ဒီလိုပြောတော့ ပိုလိုက်တာ လို့ ခင်ဗျားတို့ထင်ကြမလား ??? ။ ။
-Aye Sad (MMU)
11:55 PM( 28-May-13 )
>>သဘောတိုက်ဆိုင်သူ ရင်ဘတ်ချင်းတူသူ မည်သူမဆို လွတ်လပ်စွာ
မျှဝေခံစားနိုင်ပါသည်…..သို့သော်…Page များတွင် ပြန်တင်ချင်သော ညီအစ်ကိုများ..ကျေးဇူးပြုပြီး
အပေါ်က Caption စာပါ တွဲတင်ပါခင်ဗျာ…ဒါမှပိုနားလည်ကြမှာပါ။<<
-hatch cleaning photo-sir travero